अभिनेत्री तथा निर्मात्री पूजा शर्मा बोर्डकी अध्यक्ष निकितासँग आक्रोशित
काठमाडौं, २४ साउन । अभिनेत्री तथा निर्मात्री पूजा शर्मा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग आक्रोशित बनेकी छन् । उनले आफ्नो फिल्म ‘रामकहानी’ अरुसँग जुधाएको भन्दै पौडेलसँग आक्रोशित बनेकी हुन् ।
अभिनेत्री शर्माले विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर पनि चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि पौडेलले राम्रो नगरेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट भएको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘चलचित्र विकास बोर्डको महिला अध्यक्ष भनेर चलचित्रकर्मीको सहयोग र सीम्प्याथी पनि लिनुहुन्छ ।
तर, एउटा यस्तो संस्थाको अध्यक्ष भएर चलचित्रकर्मीलाई साथ र सहयोग गर्दै सबैलाई मिलाएर चलचित्रको विकासमा ध्यान दिनुभन्दा एउटा महिलाले नै निर्माण गरेको चलचित्रसँग जुधाएर कुन चाहिँ विकासको लागि लड्दै हुनुहुन्छ ? तपाइले मेरो चलचित्र ‘रामकहानी’ सँग जुधाउनुपर्छ भनेर गरेको प्लानबारे पनि जानकारी पाइसकेको छु ! यो कस्तो चलचित्रको विकास गर्दै हुनुहुन्छ ?’
फिल्म रिलिजको समयमा फिल्मकर्मीहरुले प्रचारका लागि अनेक हतकण्डा अपनाउने गरेका छन् । पूजाले पनि फिल्मको प्रचारको लागि यसप्रकारको शैली प्रयोग गरेको फिल्म पण्डितहरुको बुझाइ छ ।
फिल्मका लागि तयार भएका दर्शक पनि पूजाकाे यस्तो शैलीले भड्किन सक्ने बताइएको छ । चलचित्र वृतमा घमण्डी अभिनेत्री समेत भनिँदै आएकी पूजाले यसपटक भने आफ्नो व्यवहार सबैसामु देखाइन् ।
फिल्म चल्न आक्रोश होइन राम्रो कथा र अभिनय चाहिन्छ भन्ने कहिले सम्झिने पूजाले ?